एसईई त कट्यो अब के पढ्ने ? यसरी छानौं कलेज र विषय.. - नयाँपुल अनलाइन डटकम
काठमाडौं । भर्खरै एसईईको नतिजा प्रकाशित भएको छ। विद्यार्थी कहाँ कुन विषय पढ्ने भनेर कलेजको खोजीमा दौडिरहेका छन्। आफ्नो छोराछोरीलई कस्तो विषय पढाउने भनेर अभिभावकसमेत अन्योलमै छन्। विद्यार्थीहरु कहाँ पढ्ने ? के विषय पढ्ने ? भन्ने दुविधामै छन्।
सरकारले विषय र संकायअनुसार फरक–फरक मापदण्ड तोकेको छ । त्यसैले अधिकांश अनिवार्य विषयमा डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ । यसरी विषयगत मापदण्ड पूरा गरेका विद्यार्थीले मात्र कक्षा ११ को भर्ना सहज हुन्छ ।
विगत ३ वर्षदेखि सरकारले कोही असफल नहुने भनिएको लेटर ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । अब विद्यार्थीले आफुले प्राप्त गरेको ग्रेडका आधार संकाय र विषय छनोट गर्न सक्ने छन् ।
धेरै अभिभावक तथा विद्यार्थीले समयमा उपयुक्त विषय छनोट गर्न नसक्दा उच्च तहमा पुगेको अलपत्र पर्ने गरेको पाइन्छ । हालसम्मको अध्ययनले धेरैजसो विद्यार्थीले कक्षा १२ पछि आफूले पढेको विषय बदल्ने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त पाइन्छ । विगत वर्षहरूमा प्लस २ मा साइन्स पढेका विद्यार्थी माथिल्लो तहमा अन्य विषय अध्ययन गरेको उदाहरण धेरै छ ।
विद्यार्थीको क्षमता र इच्छाअनुसार विषय छनोट गर्न नसक्दा उच्च तहमा गएर विषय मात्र होइन संकाय नै बदलेको प्रशस्त घटनाहरू छन् । एसईई दिएका विद्यार्थीले कस्ता विषय रोज्ने ? त्यो विषय अध्ययन गरेका जनशक्तिको बजारमा कस्तो माग छ ? रोजेको विषय पढेर पूरा गरेपछि त्यसको समाजमा कस्तो स्टाटस हुन्छ जस्ता कुराहरूले विद्यार्थीलाई अलमलमा परेको पाइन्छ । कुनै पनि विद्यार्थीले आफ्नो विषय छान्दा त्यो विषयमा स्वदेश तथा विदेशमा माग कस्तो छ, हेर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।
त्यति मात्र होइन विषय छान्दा विद्यार्थीले लगानीको प्रतिफल दिने तथा समाजमा राम्रो स्टाटस दिन सक्ने विषय छान्नुपर्छ । विश्व बजारलाई हेर्दा सीए, बीबीए, बीबीएस, एमबीएस, एमबीए, आईटी, इन्जिनियरलगायत प्राविधिक विषयको माग राम्रो देखिन्छ । समाजमा पनि यस्ता विषय पढ्ने व्यक्तिलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पाइन्छ । यस कारण आफ्नो क्षमता भए उच्च तहमा यस्ता विषय अध्ययन गर्न सहज हुने गरी कक्षा ११ बाट नै अध्ययन नियमित गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
अब कक्षा ११ र १२ को अध्ययन पछि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका कोर्स अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमानै विभिन्न किसिमका प्राविधिक तथा साधारण कोर्सका लागि नेपाली विश्वविद्यालयदेखि विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू छन् । त्यस्ता विषयहरू निजीस्तरका विभिन्न कलेजले समेत पढाउँदै आइरहेका छन् । प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न अघि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा पढ्नु अघि कुनै पनि विद्यार्थीले पढ्न लागेको विषयको नेपाल र विश्वमा माग छ कि छैन ? आफूले पढ्न सक्छु सक्दैन भनेर विषयको बारेमा बुझ्ने, उक्त विषय पढ्न आफ्नो आर्थिक अवस्थाले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भनेर पहिले नै विचार गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थीले अध्ययन गर्न खोजेको विषयको कार्यक्रम कुन विश्वविद्यालयमा छ, त्यसबारे पहिले ध्यान दिनुपर्छ । नेपलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलगायतका निजी विश्वविद्यालयबाट समेत विभिन्न संकायका कार्यक्रमहरूको अध्यापन हुने गरेको छ ।
यसैगरी केही निजी कलेजहरूले विदेशी विश्वविद्यालयका कोर्षहरू पनि अध्यापन गराएका छन् । तपाईं कुन विश्वविद्यालयको कोर्ष पढ्न चाहनुहुन्छ सो बारे निश्चित हुनुपर्छ । यस्ता विद्यालयहरूका विषय छान्नुभन्दा पहिले उनीहरूको पाठ्यक्रम, सिलेबस पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । यसरी तपाईंलाई बढी रुचि भएको तथा आफ्नो आर्थिक अवस्थले भ्याउने खालका विषय छान्दा अझ राम्रो हुन्छ ।
यसैगरी विश्वविद्यालयको सफलता तथा नेपाल तथा विदेशमा दिइने मान्यता हेर्नु अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । यसको अर्थ तपाईंले अध्ययन गरेको युनिभर्सिटी कोर्षलाई अर्को विश्वविद्यालयले कत्तिको मान्यता दिन्छ भन्ने हो । अध्ययनका क्रममा अर्को विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने चाहना राख्दा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कलेजमा अध्ययन गरेको ज्ञानलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्न इन्टानसिप तथा प्रोफेसनल ट्रेनिङहरूको आवश्यकता पर्दछ । यसको लागि सम्बन्धित कलेजले इन्टानसिपका लागि विद्यार्थीलाई आईटी इन्डस्ट्रीमा पठाउने गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ ।
विद्यार्थीहरुले आफूलाई पायक पर्ने विद्यालय र आफ्नो रुचीको विषय पढ्नुपर्ने शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । ‘आफूले लिएको लक्ष्य अनुसार पढन सकियो भने सफल पनि होइन्छ र पछि पछुताउनु पर्दैन ।’ उनले भने ।
अभिभावकले दबाबमा विद्यार्थीलाई पढ्न लगाउन नहुने मात्र नभएर विद्यार्थीले पनि अभिभावकको कुरै नसुनी मनलाग्दी विषय र कक्षा ११ पढाइ हुने विद्यालय छनौट गर्न पनि नहुने उनले जनाए । ‘आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई हेरेर विद्यालय र विषय छान्नुपर्छ, सकभर आफूले रोजेको विषय आफू १० सम्म पढेको विद्यालयमा छ भने त्यही पढ्न उचित हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यतिबेला विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिन अत्यन्तै जरुरी छ । विद्यालयहरुले गर्ने प्रचारको पछि लाग्नुभन्दा राम्रोसँग बुझेर सही विद्यालय र सही विषय छनौट गर्नु वुद्धिमानी हुन्छ ।’
टिनएजको मध्य अवस्थामा पुगेका कारण विद्यार्थीले यो समयमा के गर्ने भनेर निक्र्योल गर्न सकेका हुँदैनन् । ठीक त्यसरी नै एसईईको नतिजापछि पनि कुुन विषय पढ्ने, कहाँ पढ्ने भन्ने निक्र्यौल गर्न मुश्किल छ । विद्यार्थीले साथीको लहलहैमा लागेर वा कलेजको प्रभोलनमा परेर विषय तथा कलेज छनोट गर्नु नहुनेमा शिक्षकहरुको जोड छ ।
कलिलो उमेरका विद्यार्थीहरु साथीहरुको लहलहैमा लागेर, बिल्डिङ राम्रो देखेर, विज्ञापन राम्रो देखेर, कतिपय अवस्थामा कलेजको युनिफर्म राम्रो देखेर, स्कुलका सवारी साधन राम्रो देखेर, लामो कपाल राख्न पाउने भएर, लामो दूरीको स्वदेश वा विदेशको भ्रमण अवसर हुने भएर पनि कतिपय विद्यार्थीले स्कुल वा कलेज रोज्ने गरेको पनि पाइन्छ । आफ्नो रुची, चाहना र क्षमता सबैभन्दा बढी आफैलाई थाहा हुन्छ ।
आफूले अध्ययन गर्न सक्ने विषय वा शैक्षिक धार र भोलि मार्केटमा रोजगारी पाउने र गुणस्तरीय जीवन जीउन सकिने हुन्छ भनि विचार गरेर छनोट गर्नुपर्ने सुझाव छ भक्तपुर स्थित शारदा माविका प्रअ रोशन तुईतुईको ।
विद्यार्थीले पनि आफ्नो रुचि, चाहना र क्षमताको विषय क्षेत्रको बारेमा थप परामर्शको लागि आफ्ना अभिभावक, आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयका शिक्षक, शिक्षिकाहरुसँग पनि परामर्श लिई, आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विद्यालयको विगतको रिजल्टको अवस्था, शैक्षिक सुविधाका विषयहरुमा विभिन्न माध्यमबाट सूचना लिई आफ्नो अनुकुलको विद्यालयको छनोट गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव छ, भक्तपुर स्थित वागीश्वरी मावि(कलेज)का सहायक प्राचार्य ज्ञानसागर प्रजापतिको ।
यसबाहेक उनी कक्षा ११ र १२ पढाइ हुने निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयको वेवसाइटबाट पनि कुन कलेज कस्तो ! भनी छुट्याउन सक्ने उपाय बताउँदै विद्यार्थीले मात्र नभएर अभिभावकले पनि त्यसबाट विद्यालयमा कस्तो कस्तो विषयको पढाइ हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘अहिले त अभिभावकले विद्यालयको भ्रमण गर्ने, शिक्षक शिक्षिकाहरुसँग शुल्क, पढाइ र सुविधाबारेमा जानकारी लिने, छलफल गर्ने गर्नुपर्ने भएको छ ।’ उनले भने ।
विद्यार्थी सरल विषय पढेर सहज ढंगले पास हुन सकिन्छ भन्ने कुराबाट पनि प्रभावित हुन्छन । यसले भोलिको भविष्यमा पर्ने प्रभावबारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने ख्वप कलेजका प्रिन्सिपल रुपक जोशीले बताए । उनले धेरै विद्यार्थीले जुन विषय पढे पनि निक्कै ख्याल गरेर र गम्भीर भएर अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई सुझाए ।
हाल निजी स्तरबाट सञ्चालित उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन प्राविधिक र रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिन थालिएको छ । नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयबाट नभई विदेशी विश्वविद्यालयको समेत सम्बन्धन लिएर निजी क्षेत्रका कलेजहरूले कोर्स सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
निजी कलेजहरूको बाक्लो उपस्थितिले अध्ययन–अध्यापनको परम्परागत शैली नै बदलिएको छ । सैद्धान्तिक पक्षलाई समेत प्रयोगात्मक ढंगबाट पढाएर विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबै कलेज अहिले प्रतिस्पदाकै रूपमा लागेका छन् । राजनीति, अन्य दबाबमा नभएका कारण र नियमित पठन–पाठन गरिने हुँदा हाल निजी कलेजले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।
निजी कलेज सरकारी कलेजको तुलनामा महँगा हुने भए पनि विद्यार्थीले निजी कलेज नै रोज्न थालेका छन् । अभिभावकमा पनि जसरी भए पनि छोराछोरीलाई निजी कलेज नै बढाउन चाहन्छन् । हुन त निजी मात्र नभएर इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, वन, कृषिजस्ता विषय महँगा विषय अध्ययनका लािग विद्यार्थीले सरकारी क्याम्पस पनि रोजने गर्छन् ।
निजी कलेज महँगो हुने भए पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन त्यसमा विविधता ल्याउन सकिएको छैन । सरकारले १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह भने पनि यो वर्षसम्म कोर्स भने विभिन्न विश्वविद्यालयले तह गरेका पुरानो कोर्स नै अध्ययन अध्यापन गराइँदै आएको छ ।
अहिले सही विषय र सही विद्यालय छनौट गर्न सकियो भने एसईईपछिको करिअर राम्रो बनाउन सकिने भएकोले निक्कै ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।
गुणस्तरिय प्राविधिक शिक्षामा जोड दिदै पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका
फोनिज दोलखाको २०औं स्थापना दिवस मनाइयो